Fahasalamana : 17 tapitrisa dolara hiadiana amin’ny tazomoka | NewsMada
Fahasalamana : 17 tapitrisa dolara hiadiana amin’ny tazomoka
Nandray ireo tompon’andraikitra ambony mpiara-miombon’antoka eo amin’ny sehatry ny fahasalamana ny filoha Rajaonarimampianina Hery, teny Iavoloha ny alakamisy teo. Noraisiny tamin’izany ny avy amin’ny Global Fund, Ariane Lopez Hunte sy ny avy amin’ny Gavi, Véronique Maeva Fages.
Notronin’ny solontena maharitry ny Unicef miasa eto Madagasikara, Elke Wisch, sy ny solontena maharitry ny OMS miasa eto, Charlotte Faty Ndiaye, izy ireo tamin’izany fihaonana izany.
Ho an’ny Global Fund, nilaza i Ariane Lopez Hunte fa « eo am-pamaranana ny famolavolana ny famatsiam-bola ho amin’ny ady atao amin’ny aretina tazomoka, VIH/Sida ary raboka no tena himasoan’izy ireo amin’izao fotoana izao». Mitentina 17 tapitrisa dolara izany vola izany. Efa hatramin’ny taona 2004 ny tetikasa momba ny fahasalamana niarahana tamin’ny Global Fund ary mitohy hatramin’izao.
Tetsy andaniny, nilaza ny avy amin’ny Gavi fa tonga amin’izao fihaonana izao izy ireo miaraka amin’ny mpiara-miombon’antoka eo amin’ny sehatry ny fahasalamana rehetra ho amin’ny fanombohana ny famatsiam-bola indray manodidina ny vaksiny hanamafisana ny fahasalaman’ny ankizy malagasy.
Voakasik’izany indrindra ireo faritra tena saro-dalana izay tokony hamafisina hatrany ny fanaovam-bakisiny any amin’ireny toerana ireny. Tanjon’ny Gavi ny hanatanteraka tetikasa vaovao mitentina 16 tapitrisa dolara izay hotanterahina ao anatin’ny telo taona manaraka.
« Amin’ity herinandro ity, hamarana indrindra ny drafitrasa rehetra ho fanatanterahana izany fandaharanasa izany izahay hahafahana manomboka ny asa amin’ny volana marsa ho avy izao », hoy ny tompon’andraikitra avy amin’ny Gavi.
Nanararaotra ny fihaonana tamin’ny filoha ihany koa izy ireo hijerena ny fahafahana miasa maharitra eo amin’ny sehatry ny fanaovam-baksiny, ny lalàna mikasika izany…